❤️ Ahoana ny fomba fanaovana ny Instagram anao manokana - Winches Club
Ahoana ny fomba fanaovana ny Instagram anao manokana
Manana lahatsoratra fohy izahay ho an'ny Instagrammers rehetra te-hahafantatra ny fomba ahafahan'izy ireo manao ny kaontiny Instagram manokana. Raha tsy tianao ho hitan'izao tontolo izao ny votoatinao Instagram, vakio raha te hahalala hoe mora ny mamadika ny kaontinao Instagram ho fantsona manokana ho an'ny mpanaraka anao. Ny hoe mitokana dia midika fa tsy mila manahy momba ny fanakanana olona ianao, izay azonao mifankahalala eto.
Inona no atao hoe kaonty Instagram manokana ?
Ny fanaovana ny Instagram anao manokana dia midika fa ny kaontinao dia tsy hampiseho afa-tsy ny anaranao sy ny fampahalalana fototra rehefa mitady anao ny olona.. Izay te hahita ny atiny dia mila mangataka ny hanaraka anao, fa aza manahy, mbola ho hitan'ny mpanaraka anao taloha daholo ny hafatrao na dia mandeha mitokana aza ianao.
Misy antony maromaro mety haniry handeha manokana, ohatra raha marika ianao ary te hanolotra fanavakavahana ho an'ireo mpanjifanao.
Maro koa ny olona manapa-kevitra ny handeha manokana mba hisarihana mpanaraka., satria ny marika manokana dia matetika mahasarika olona, izay misy fiantraikany amin'ny fampitomboana ny isan'ny mpanaraka.
Ity ny torolàlana haingana, ary raha mihodina ianao, ho hitanao ny dingana tsirairay arahin'ny sary:
Mandehana any amin'ny mombamomba anao ary tsindrio ny hamburger ambony havanana
Dia tsindrio Fikirana
Dia tsindrio ny fiainana manokana
Dia tsindrio Kaonty tsiambaratelo
Tsindrio ny bokotra Kaonty manokana
Avy eo dia hasaina ianao hamerina hijery ireo mpanaraka anao raha tianao.. Azonao atao ny mifamadika amin'ny fomba manokana mankany amin'ny maodely ho an'ny daholobe isaky ny tianao amin'ny famerimberenana ireo dingana ireo.
Raha manaraka tsara ireto dingana ireto ianao, tokony ho afaka ianao manova mora foana ny kaonty Instagram rehetra izay nalainao tao anatin'ny iray minitra latsaka. Ny firafitry ny Instagram dia manana menus maromaro, fa rehefa fantatrao ireo, mora mandeha.
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fomba hamafana ny kaonty Instagram
Lahatsoratra manarakaFitaovana fikarohana Hashtag Instagram